VaNelson Chamisa Vopedza Zvidzidzo zveHufundisi Mukereke yeAFM
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato rinopikisa reMDC, VaNelson Chamisa nemusi weChishanu vakagadzwa semufundisi wechechi yeApostolic Faith Mission mushure mekupedza zvidzidzo pamamabiko akaitiriwa pachikoro chekudzidzira hufundisi che Living Water Bible College muHarare.
VaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo vachimirira vanhu munyaya dzematongerwo enyika zvakakosha kuziva mwari.
VaChamisa vaudza Studio 7 kuti kuda mwari kuda vanhu uye vachafamba neshoko zvisinei nekuti vanhu vanomiririra bato ripi. Mukuru wechechi yeAFM muZimbabwe, VaMadziyire vanoti zvakakosha kuti vezvematongerwa enyika pamwe nevanhuwo zvavo vatambire Mwari.
Vati vakuru venyika vanoziva Mwari vanosimudzira nyika. VaMadziyire vanoti zvakakosha kuti nyika itungamirirwe nevanhu vanokudza Mwari uye vati nyika inogona kubudirira kana vanhu vachinamata. VaChamisa igweta uye vakadzidzirawo zvemabhizimisi uye kuddyidzana nedzimwe nyika.